नेप्से १४.१२ अंकले बढ्दा कारोबार रकम १ अर्ब नाघ्यो, तीन कम्पनीको शेयर मूल्यमा बढेर सर्किट, कुन कम्पनीको भयो सर्वाधिक कारोबार ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नेप्से १४.१२ अंकले बढ्दा कारोबार रकम १ अर्ब नाघ्यो, तीन कम्पनीको शेयर मूल्यमा बढेर सर्किट, कुन कम्पनीको भयो सर्वाधिक कारोबार ?
वैशाख ३१, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से परिसूचक १४ दशमलव १२ अंकले बढेर १ हजार ३१५ दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टाको अवधिमा १ हजार ३२१ विन्दुमा पुगेको थियो । नेप्सेको वेबसाइटमा समस्या आएपछि साढे दुई घण्टा कारोबार हेर्न सकिएपनि ब्रोकरमा बस्ने लगानीकर्ताहरुले भने कारोबार हेर्न पाएका थिए ।
कारोबार भएका १२ समूहको परिसूचकमा व्यापर बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ३ दशमलव ३४ अंकले बढेको छ । निर्जीवन बीमा र बैंकिङ समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।
तीन कम्पनीको शेयरमा बढेर सर्किट
मंगलवार तीन कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले सार्वजानकि गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा रू. १ अर्ब १२ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको र रू. ५८ करोड ४८ लाख नाफा कमाएपछि कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्न पुगेको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ११ हजार ५५ पुगेको छ । दोस्रोमा सोही कम्पनीको संस्थापकतर्फको शेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. १० हजार ६३ पुगेको छ । तेस्रोमा शिवम् सिमेण्टको ९ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेर शेयर मूल्य रू. ५४६ पुगेको छ ।
मंगलवार रू. १ अर्ब ३ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम ३१ दशमलव ९० प्रतिशत बढेको छ । सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ५४ अंकले बढेर २ सय ७९ दशमलव ७४ विन्दुमा पुगेको छ ।
नेपाल बैंकको सर्वाधिक १० करोडको कारोबार
नेपाल बैंकको सर्वाधिक रू. १० करोड ३१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता शेयर मूल्य रू. ३१४ रहेको छ । दोस्रोमा शिवम् सिमेण्टको रू. ८ करोड ४१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएका १७० कम्पनीमा १०३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ५४ कम्पनीको घटेको छ । साथै, १३ कम्पनीको स्थिर रहेको छ ।